Qaban qaabada Xaflada ku dhawaaqista Ra’iisul Wasaaraha oo bilaabatay iyo Wariyeyaasha oo loo yeeray | Radio Baidoa
Guriga Wararka Idaacada Qaban qaabada Xaflada ku dhawaaqista Ra’iisul Wasaaraha oo bilaabatay iyo Wariyeyaasha oo...
Qaban qaabada Xaflada ku dhawaaqista Ra’iisul Wasaaraha oo bilaabatay iyo Wariyeyaasha oo loo yeeray
Qabana qaabada xafkada ku dhawaaqista Ra’iisul Wasaaraha ayaa ka bilaabatay xarunta Madaxtooyada Villa Soomaaliya, iyadoo Wariyeyaasha warbaahinta gudaha iyo tan caalamigaba loo yeeray.
Xafiiska Warfaafinta Madaxtooyada ayaa Wariyeyaasha ku casuumay galabta saacada geeska Afrika marka ay tahay 4-ta Galabnimo inay isugu yimaadaan Madaxtooyada, xilligaasoo ay bilaabaneysa xaflada magacaabista Ra’iisul Wasaaraha.
Wararka ayaa sheegaya inay u badan tahay in loo magacaabi doono jagada Ra’iisul Wasaaraha Cumar Cabdirashiid Cali Sharma’arke, kaasoo shalay soo gaaray magaalada Muqdisho, kadib safar deg deg ah oo uu uga yimid dalka Mareykanka.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa xalay la kulmay Cumar Cabdirashiid, iyagoo ka wada hadlay qorshayaasha Xukuumada la soo dhisayo, qaabka loo soo xulayo Wasiirada, sida Baarlamaanka kalsoonida loogu heli karo.
Waxyaabihii ay ka wada hadleen labada dhinac ayay isku afgarteen sida ay ilo wareedyo ku dhow dhow Madaxtooyada ay xaqiijiyeen.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa si rasmi ah waxaa uu galabta ugu dhawaaqi doonaa Ra’iisul Wasaarihii saddexdaad, tan iyo markii uu xafiiska qabtay dhamaadkii sanadkii 2012.